सोधिने प्रश्न - Spieth (जियामेन) प्रौद्योगिकी लिमिटेड कं,
हो, हामी निरन्तर न्यूनतम आदेश मात्रा छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय आदेश चाहिन्छ। तपाईं resell तर धेरै सानो परिमाणमा गर्न खोजिरहेको छ भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो सबै भन्दा राम्रो मूल्य पुग्न आफ्नो मात्रा वृद्धि गर्न सुझाव दिन्छौं।
7 दिन चार्ज लागि मुक्त र माल लागत लागि मात्र चार्ज नेतृत्व समय छ।
ठूलो उत्पादन लागि
नेतृत्व समय निक्षेप भुक्तानी प्राप्त गरेपछि 20-30 दिन छ। (1) हामी आफ्नो जम्मा प्राप्त गरेका गर्दा, र (2) हामी आफ्नो उत्पादनहरु को लागि आफ्नो अन्तिम अनुमोदन नेतृत्व पटक प्रभावकारी हुन्छन्। यदि हाम्रो नेतृत्व पटक आफ्नो म्याद काम छैन, आवश्यकताहरु आफ्नो आफ्नो बिक्री संग भन्दा जाने गर्नुहोस्। सबै अवस्थामा हामी आफ्नो आवश्यकता समायोजित गर्न प्रयास गर्नेछ। प्रायजसो हामी त्यसो गर्न सक्षम छन्।
: तपाईं हाम्रो बैंक खाता, टी / टी, एल / सी गर्न भुक्तानी गर्न सक्छन्
बी / एल को प्रतिलिपि विरुद्ध अग्रिम 30% जम्मा, 70% रकम।
हामी अनुचित मानव कार्यका लागि बाहेक 5-वर्षसम्म हाम्रो RACKING र शेल्भिङ ग्यारेन्टी।
हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो उत्पादनहरु आफ्नो सन्तुष्टि छ। ग्यारेन्टी वा छैन, यो ठेगानामा हाम्रो कम्पनी को संस्कृति छ र सबैको सन्तुष्टि सबै ग्राहक मुद्दाहरू समाधान
हो, हामी उच्च गुणवत्ता निर्यात प्याकेजिङ्ग सधैं प्रयोग गर्नुहोस्।
म रैक कसरी स्थापना गर्न सक्छ?
हामी विस्तृत प्रदान तखता हरेक प्रकार को लागि निर्देशन स्थापना गर्नुहोस्। आवश्यक छ भने, हामी पनि निःशुल्क ईन्जिनियरहरु भिडियो प्रदान गर्नुहोस्।
म छिटो उद्धरण कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्?
(1) गोदाम को आकार?
(2) फूस रैक आयाम: लंबाई * गहिराई * लंबाई?
(3) कति तहहरू?
(4) प्रत्येक स्तर को क्षमता लोड? (यदि सम्भव छ भने, तपाईं दयालु आफ्नो माल के हो मलाई भन सक्छ?)
(6) कति खण्ड (सेट)?
वेयरहाउस फूस Racking प्रणाली , फूस Racking Uprights , Foldable वायर मेष कन्टेनर , गोदाम फूस र्याक , फूस Racking संरक्षक , वेयरहाउस भण्डारण रैक ,